Mpanamboatra sy mpamatsy ny hetsi-panoherana Mini Scellor any China Daxin
Ny hetsi-pisakafoanana kely ho an'ny tenany dia volo miaraka amina radius kely ho an'ny sehatry ny asa mafy. Mazava izy io, midika izany fa azo ampiasaina amin'ny gorodona marefo. ary ety ivelany.
Sehatra haben'ny sehatra: 1170 * 600mm
Haavo isan-karazany: 300kg
Halavan'ny haavon'ny Max Platform: 3m ~ 3.9m
Misy fiantohana fandefasana ranomasina maimaim-poana
Ny fandefasana LCL maimaim-poana dia misy any amin'ny seranana sasany
Endri-javatra & fanamboarana
Fampisehoana sary tena izy
Max. Haavo ambony (mm)
Max. Haavo miasa (mm)
Angovo azo isaina (kg)
Haben'ny sehatra (mm)
Min. mihodina radius (mm)
Max. Drive peed (Nesorina ny lampihazo)
Max. Haingam-pandeha (Sidina midina)
Hafainganana / haingam-pandeha (SEC)
Max. Kilasy fitsangatsanganana (%)
Motera moto (V / KW)
Motera mitraka (V / KW)
Charger (V / A)
Max zoro miasa azo avela
Halavan'ny ankapobeny (mm)
Sakany ankapobeny (mm)
Haavo ankapobeny (mm)
Milanja ankapobeny (kg)
Toeram-pamokarana sy motera Hydraulika
Toro-marika bateria sy plug plug
Fanaraha-maso eo amin'ny chassis
Fanaraha-maso mifehy eo amin'ny lampihazo
Kodiarana mitondra fiara
Teo aloha: Fananganana hety finday Mini
Manaraka: Fananganana hetra amin'ny alikaola
Rafitra fandefasana tena amin'ny tranokala maneuvering avy amin'ny lampihazo (storn)
Roll extension extension dia mitazona izay rehetra ilainao ho azon'ny sandry (tsy voatery)
Kodiarana tsy marika
Loharanon-kery - 24V (batterie 6V AH efatra)
Midira amin'ny vavahady tery sy amin'ny lalantsara ety
Dimy azo ampitahaina amin'ny fitahirizana toerana mahomby.
Moto mitondra herinaratra
Rafitra fanaraha-maso mitondra herinaratra
Toeram-pahefana elektrika sy paompy hydraulic
Charger bateria manan-tsaina
Tanana fanaraha-maso ergonomika
Varingarin'ny hydraulic mahery
Ny hetsi-pisakafoanana kely ho an'ny tenany dia volo miaraka amina radius kely ho an'ny sehatry ny asa mafy. Mazava izy io, azo ampiasaina amin'ny gorodona mora tohina. Malalaka ny sehatra mitazona mpiasa roa ka hatramin'ny telo ary azo ampiasaina ao anaty trano izy roa. ary any ivelany dia manana 300KG mahazaka lanja ary mahay mitondra ny mpiasa sy ny fitaovana. Manana famenoana bateria afovoany izy io, ka mahatonga ny fikolokoloana bateria ho mora kokoa.
Ankoatr'izay, azo entina amin'ny haavony feno izy ary manana rafitra fiarovana lavadavaka anatiny ao anatiny, izay hanomezana fanampiana raha entina amin'ny toerana tsy mitovy izy io. fiakarana hafa ao amin'ny kilasiny. Ny fiakaran'ny hety dia ambany ny vidin'ny fandidiana satria tsy manana rojo, telegrama na roulant ao amin'ny felany.
Self scelled Mini Scissor Lift dia mandrafitra rafitra vatasarihana manokana. Roa "mpantsaka" dia misy fitaovana amin'ny ilany havanana sy havia amin'ny vatan'ny hety. Atao anaty vatasarety iray ny tobin'ny paompy sy motera elektrika. Arotsaka ao anaty vatasarihana hafa ny bateria sy ny charger. Ny rafitra manokana toy izany dia manamora ny fikojakojana azy
Fitaovana fanaraha-maso Up-down roa napetraka. Ny iray dia eo amin'ny ilany ambany amin'ny vatana ary ny iray kosa eo amin'ny lampihazo. Ny fikirakirana ny ergonomika eo amin'ny lampihazo dia mifehy ny fihetsiky ny hetra rehetra.
Vokatr'izany dia nanatsara ny fahombiazan'ny mpanjifa ny fahaizan'ny scissor mini.
mpamatsy fiakarana an'habakabaka
Mpamatsy Anglisy Scissor Lift
Mpamatsy Platform Aerial Work
fananganana hety sinoa. mpamatsy fampiakarana rivotra
fananganana hety manokana
mpamatsy angovo hety diesel
Fananganana hetra elektrika
Mpamatsy fiakarana hydraulic Scissor
Mpamatsy finday scissor mobile
Fampiakarana hety Mini
Mpamatsy fampiakarana hetra terrain terrain terrain
Mpamatsy Scissor Lift
mpamatsy hetra mihetsiketsika mihetsika
Mpamatsy fampiakarana heno manokana